मि'र्गौला त'स्करी आरोपमा चार डाक्टर सहित एक प्रहरी पक्राउ
मि’र्गौला त’स्करी आरोपमा चार डाक्टर सहित एक प्रहरी पक्राउ
चितवन, २८ असार। चीतवनस्थित भरतपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत चार जना डाक्टरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृतलाई नेपाल प्रहरीको मानव बे’चबि’खन तथा अ’नुसन्धान ब्यूरोले शनिबार साँझ पक्राउ गरेको छ।
कलेजका निर्देशक मनोहर प्रधानका अनुसार एक वर्षअघि गरिएको मि’र्गौला प्रत्यारोपणका विषयमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. बालकृष्ण कालाखेती, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल र कानूनी सल्लाहकार रमेश काफ्लेलाई सोधपुछका लागि ब्यूरोले निय’न्त्रणमा लिएको छ।
क’लेजको मा’नव अ’ङ्ग प्रत्या’रोपण समितिमा पाँचजना सदस्य रहेका छन् । उनीहरु बाहेक समितिका सदस्य सर्जन डा. राकेश बर्मा भने फेला नपरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । प्रधानका अनुसार एक वर्षअघि काठमाडौंका एक पुरुषको मि’र्गौला प्रत्या’रोप’णको विषयलाई लिएर उनीहरुलाई अनु’सन्धान गर्ने भन्दै निय’न्त्रणमा लिइएको हो ।
प्रत्या’रोपण भएका व्यक्ति नेपाली भएको र सरकारका सबै माप’दण्ड पूरा गरेर प्रत्या’रोपण गरिएको भए पनि के कति कारणले नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने प्रस्ट नभएको बताए । हालसम्म सो मेडिकल कलेजले चार जनाको मृ’गौला प्रत्या’रोपण गरेको जनाएको छ । रासस